Obama-themed malware on the rise — MYSTERY ZILLION
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ အိုဘားမားအား presidentအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်အပြီး နာရီပိုင်းအနည်းငယ်အကြာတွင် အိုဘားမား၏ ဓာတ်ပုံပါ၀င်သည့် spam email များ ကမ္ဘာအနှံ့ ပျံနှံ့ခဲ့ကြောင်း နှင့် ဗြိတိန်အခြေစိုက် Sophos အဆိုအရ Wednesdayတွင် တွေ့ ရသောထိုအီးမေးလ်များ၏ 60% မှာ အိုဘားမားနှင့် ဆက်နွယ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို spam email တွင် အိုဘာမား၏ အောင်ပွဲခံမိန့်ခွန်း Video ကို ကြည့်နိုင်သည့် link တစ်ခုပါရှိကာ ထို Email link မှတစ်ဆင့်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် သင်၏ Flash player ကို Version မြှင့်ရန်(update your Adobe Flash Player withafile, adobe_flash9.exe, first.) သတိပေးသည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခုဆီတို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကာ ထိုအတုအယောင် Flash player အား သင်၏ ကွန်ပျူတာအတွင်းတို့ Trojan Virus တစ်မျိုး ၀င်ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Sophos named the Trojan Mal/Behav-027. F-Secure named it W32/Papras.CL. Sunbelt Software also hasablog about this particular piece of spam. လို့သတ်မှတ်ကြတယ်။
အခြား Email Virus တစ်ခုမှာ သမ္မတသစ် အိုဘားမားနှင့် အင်တာပျူးလုပ်ထားခြင်းကို ပေးပို့သည့် Email ကဲသို့ ပုံမှားရိုက်ထားသည့် အီးမေးလ်ဖြစ်ပြီး ထိုအီးမေလ်တွင်ပါရှိသော link ကိုသွားမည်ဆိုပါက(The e-mail features embedded links toavideo site that attempts to installafile, BarackObama.exe.)ဒီဖိုင်ကို download လုပ်မီပါက computer အတွင်း ထို Trojan Virus ၀င်ရောက်သွားပါတယ်။
သတိပေးရုံ သက်သက်ဘဲလို့ မြင်ရင်လဲ သတိထားပေးပေါ့။
မေးလ်တွေတော့ အနော် မှန်မှန်မစစ်ဖြစ်ဘူး။ဒီကြောင်းလဲတွေ့ ရောစစ်ကြည့်လိုက်တော့ ရောက်နေတယ်...အနော်တော့ delete လုပ်ပစ်လိုက်တယ်....ဘယ်လိုအဖျက်သဘောဆောင်တယ်ဆိုတော့ အနော်လဲမသိပါဘူး။
အနော်မေးလ်ထဲ၀င်နေတာကတော့ WWL Mail ထဲမှာပါ။November 8 ရက်ကပါ။
အားလုံး ကိုယ့် မေးလ်ကိုပြန်စစ်ကြည့်ရအောင် တကယ်လို့ နှိပ်မီလိုက်ရင် ဘယ်လိုအဖျက်သဘောဆောင်တယ်ဆိုတာ ဒီ Thread မှာဘဲ ဆွေးနွေးကြရအောင်။
သတိပေးချက် ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါ၏ ။
ကျွန်တော့်ဆီတော့ မရောက်သေးပါ ခင်ဗျား။
အခုလို သတိပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုmk杰 ခင်ဗျား...